Ihowuliseyili PP/PS Sheet Extrusion Line Manufacturer kunye noMboneleli | INGQWELELI
Iphepha le-PP / PS umgca we-extrusion wephepha owenziwe ngu-CHAMPION MACHINERY unokwenza ngokuqhubekayo iphepha elilodwa lomaleko okanye i-multi-layers sheet. Ulawulo lweklasi yokuqala, inkqubo yokusebenza elula, ixabiso elingcono.
● I-PP eyodwa okanye i-multi-layer sheet, isetyenziswa ngokubanzi kwisitya sokutya, iikomityi.
● Umaleko omnye we-PS okanye i-multi-layer sheet, ekwasetyenziselwa iphakheji yecandelo lombane.
● Iphepha le-PP elicacileyo, iphepha lemibala emibini kunye nephepha le-matte,
isetyenziswa ngokufanelekileyo kwizinto zokubhala, njl.
I-extruder screw enye, i-twin screw extruder, i-co-extrusion
PP/PS sheet inkqubo extruder
Single extruder screw of PP/PS sheet extrusion machine yeyona imodeli iphambili kwimarike. Kwimathiriyeli yePP, sebenzisa i-non-venting screw extruder enye. Kwi-PS, sebenzisa ukuphuma kwe-scruder enye eqhelekileyo.
I-R&D ezimeleyo esebenza kakuhle kakhulu nge-scruder enye, eneplastiki elungileyo yemathiriyeli ekrwada kunye nefomula. Qinisekisa ukomelela okulungileyo kwephepha leplastiki.
Umthamo we-CHAMPION screw extruder enye unokufikelela kwi-1500kg / h.
I-twin screw extruder nayo ingasetyenziselwa iphepha lePP.
I-CHAMPION MACHINERY, i-screw structure ye-twin screw extruder ibhetyebhetye ngakumbi. Yenza ukondla kuzinzile, kwangaxeshanye, imathiriyeli yefomula kunye ne-PP exutywe ngokutsha kunye nezinto ezinyulu ziya kuba nokusasazwa okungcono kumbhobho.
PP + umatshini wokwenza isitatshi
Yongeza isitashi, iphepha lokugqibela liya kuba yinto entsha enokubola. Imveliso yokugqibela ingasetyenziselwa izitya zokutya.
Iyunithi yokwenza i-roller yekhalenda
Ngokwemveliso yephepha, khetha i-mirror surface roller, i-roller yokugaya okanye i-roller ephothiweyo. I-roller esemgangathweni ophezulu.
UMax. I-diameter ye-roller ingaba yi-800mm.
I-high-precision three roller calender forming system, exhotywe nge-SIEMENS yokulawula i-servo, ukulungiswa kwe-hydraulic, ifanelekile kwi-extrusion ezinzileyo ye-PP / PS sheet.
Ukunyamezela iqondo lobushushu kwirola yi ±1℃.
Iphaneli yesikrini efakwe kwiyunithi yekhalenda, sebenzisa umatshini weshiti nge-HMI enye kuphela.
Isikhululo sokusebenza esisodwa esinzima, i-winder ye-double work station manual, i-winder ye-auto ye-auto winder
I-Auto winder, ukusebenza ngokuzenzekelayo, ukhuseleko ngakumbi kunye nokuchaneka.
Ubude bephepha bulawulwa yi-PLC.
Isitshixo sokukhawulezisa: ngeqhosha kwiphaneli yesikrini, khawulezisa isantya somgca ngokulula kakhulu.
Ikhabhinethi yombane: isebenzisa ngokupheleleyo iklasi ephezulu kunye nezixhobo ezifanelekileyo. Uhlobo lwayo oluthe nkqo lwesakhiwo soyilo lulungele ukutshatyalaliswa kobushushu.
Ulawulo olukude kunye nokuxilongwa kweempazamo ezikude, kwenza ukulungisa kube lula kunye nokugcinwa kube lula ngakumbi.
Ngaphambili: PP/PE/PS/EVA/EVOH Multi-layer barrier Sheet Extrusion Line
Okulandelayo: I-PLA Sheet Extrusion Line